အနာဂတ်မှာ လူတွေ မိုးပေါ်ပျံသန်းဖို့ အလားအလာရှိတဲ့ စက်ပစ္စည်းနှင့် ဝတ်စုံများ - Shwe Khit Online TV
HomeAmazingအနာဂတ်မှာ လူတွေ မိုးပေါ်ပျံသန်းဖို့ အလားအလာရှိတဲ့ စက်ပစ္စည်းနှင့် ဝတ်စုံများ
September 25, 2021 Yan Amazing 0
ပရိသတ်ကြီးကို ဒီတစ်ခါ ပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ အနာဂတ်မှာ လူတွေ မိုးပေါ်ပျံသန်းဖို့ အလားအလာရှိတဲ့ စက်ပစ္စည်းနှင့် ဝတ်စုံများ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ လူသားတွေအတွက် အနာဂတ်မှည သွားလာရေး ပိုအဆင်ပြေအောင် ဘယ်လို စက်ပစ္စည်းတွေ ထုတ်လုပ်ဖို့ အလားအလာ ရှိလဲ ဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
၁ ။ Hoverbike
တစ်ခြား ပျံသန်းနိုင်တဲ့ မော်တော် ဆိုင်ကယ်တွေလိုပဲ HoverBike တွေဟာလည်း အနာဂတ်မှာ အဆင်ပြေနိုင်မယ့် ယာဉ်တစ်မျိုးလို့ ပြောရမှာပါ ။ ပုံစံပိုင်းကတော့ ကာဘွန် ဖိုက်ဘာ ဖရိန်ထဲမှာမှ အားသွင်းလို့ရတဲ့ လျှစ်စစ် တန်ပြန်လှည့် မော်တာ ( ၄ ) လုံးကို တပ်ဆင်ပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘက်ထရီ ပိုင်းမှာ ဆိုရင်လည်း လစ်သီယမ် ၊ မဂ္ဂနီဆီယမ် နဲ့ နီကယ်တို့ကို ပေါင်းစပ်ပြီး ထူးခြားတဲ့ ဘက်ထရီကို ထည့်ပေးထားပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့် အားတစ်ခါ သွင်းပိုင်းတိုင်း မိနစ် ( ၂၀ ) လောက်အထိ လေပေါ်ပျံနိုင်မှာပါ ။ လတ်တလော မှာတော့ ဒီ Hoverbike ဟာ စမ်းသပ်ဆဲ အဆင့်သာရှိသေးပြီး စျေးကွက်ထဲတင်နိုင်ဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို တိုးမြှင့်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၂ ။ The Jetwing
Swissair လေယာဉ်မှုးတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ Yves Rossy ဟာ လူတစ်ယောက်တည်း ပျံသန်းနိုင်တဲ့ Jetwing လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ( ၂၀ ) လောက်ကတည်းက ဖန်တီးဖို့ ကြိုးစားခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုအခါမှာတော့ သူ့ရဲ့ Jetwing ဟာ ပြည့်စုံ ကောင်းမွန်တဲ့ အဆင့်ကို ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ပိုမို အစွမ်းထက်တဲ့ အင်ဂျင် နဲ့ ကွန်ပျူတာ ထိန်းချုပ်မှု စနစ်တွေကို ပါ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ် ။ ဒီယာဉ်ကို ပေါ့ပါးနေအောင် လုပ်ထားတဲ့ အဓိက အချက်ကတော့ လေယာဉ် နောက်အမြှီးလိုပုံစံ မျိုး မထည့်ထားတဲ့ အပြင် အခြားသော ရွေ့လျားနိုင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ဖြုတ်ထားတာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
ထိန်းချုပ်ပုံကတော့ မောင်းနှင်မယ့်သူဟာ ပျံတက်တာ ၊ မြေပြင်ပေါ် ဆင်းတဲ့ အခါ နဲ့ လေပေါ်ပျံနေရင်း အရပ်မျက်နှာ ပြောင်းချင်တဲ့ အခါတွေမှာ သူ့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို လှုပ်ရှားပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလို အချက်တွေ ကြောင့် လတ်တလောမှာတော့ jetwing တွေဟာ အိမ်သုံးပစ္စည်း တစ်ခုတော့ ဖြစ်လာနိုင်မှာ မဟုတ်သေးပါဘူး ။ ဒါပေမယ့်လည်း လူသားတွေ ပျံသန်းဖို့အတွက် အနီးစပ်ဆုံး တီထွင်တစ်ခုထဲမှာတော့ jetwing က ပါဝင်လို့နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၃ ။ Aria
နောက်ထပ်ပြောပြပေးမှာကတော့ A&M Harmony ကနေ ဖန်တီးထားတဲ့ Aria အမည်ရှိ rotorcraft အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ ပုံစံက ကြက်ဥ ပုံ ( ဒါမှမဟုတ် ) လျှပ်စစ်မီးသီး ပုံစံ နဲ့ တူပြီး ကုမ္ပဏီ ဖက်ကတော့ ပျံသန်းတဲ့ အခါ safe ဖြစ်အောင် ၊ အသံ သိပ်မမြည်အောင် နဲ့ အလွယ်တကူ ပျံသန်းနိုင်အောင် ဒီဇိုင်းဆွဲပေးထားတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ ဒီ rotorcraft ယာဉ်ရဲ့ ကိုယ်ထည် ပတ်ပတ်လည်လည်မှာ ဓားအသွားတွေလိုမျိုး ဒလက်တွေ ထည့်ပေးထားပြီး မောင်းနှင်မယ့်သူက ယာဉ်ရဲ့ pod မှာ မတ်တပ်ရပ်ပြီး မောင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ လက်ရှိမှာတော့ စမ်းသပ်ဆဲ အဆင့်သာ ရှိသေးပြီး မကြာခင်မှာ စျေးကွက်ထဲ ချပြနိုင်တော့မှာ ဖြစ်တယ်လို့ A&M Harmony က ပြောကြားထားပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၄ ။ PAL-V LIBERTY
နောက်ထပ် ပြောပြပေးမှာကတော့ ဒတ်ချ် အင်ဂျင်နီယာ ပိုင်း နဲ့ အီတလီ ဒီဇိုင်း တို့ကို ပေါင်းစပ် ပေးထားတဲ့ PAL-V LIBERTY ကားပျံ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီ ယာဉ်ပျံ ရဲ့ အထဲမှာ လူ ( ၂ ) ယောက် စီးနင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး တင်ဆောင်နိုင်တဲ့ အလေးချိန်ကတော့ ( ၉၁၀ ) ကီလိုဂရမ် ရှိပြီး အမြန်နှုန်းကတော့ တစ်နာရီကို ( ၁၆၀ ) ကီလိုမီတာ နှုန်း နဲ့ မောင်းနှင်နိုင်မှာပါ ။ မြင်းကောင်ရေ ( ၁၀၀ ) အား ထည့်ထားတဲ့ ဒီကားဟာ အမြင့်ဆုံး ကီလိုမီတာ ( ၅၀၀ ) ကီလိုမီတာ အထိ မောင်းနိုင်ပြီး ( ၄.၃ ) နာရီကြာ ဆီစား သက်သာအောင်လည်း လုပ်ပေးထားပါသေးတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
နောက်ပြီး Pal-V ဟာ gyroplane အမျိုးအစား ဖြစ်တာကြောင့် ကားမှာပါတဲ့ ဒလက်တွေ နဲ့ လေပေါ်ကို မောင်းနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလို ကားပျံ ပုံစံကို ( ၁၉၉၉ ) ခုနှစ်တည်းက ထုတ်လုပ်ဖို့ စိတ်ကူး ရလာခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ( ၂၀၁၇ ) ခုနှစ်မှာတော့ အောင်မြင်စွာ ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ လက်ရှိမှာလည်း စျေးကွက်ထဲ ဖြန့်ချိနိုင်ဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်နေပြီး နောက်ပိုင်းတွေမှာ ဒီ့ထက်ပိုကောင်းတဲ့ မော်လ်ဒယ် ပုံစံမျိုး ဖြစ်အောင် ပိုကြိုးစား မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ထုတ်လုပ်သူတွေက ပြောထားပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၅ ။ BMW electrified wingsuit
ဒီတစ်ခါမှာတော့ BMW နဲ့ ဩစတေးလျ ပိုင်းလော့ Salzmann တို့ ပူးပေါင်းပြီး ဖန်တီးထားတဲ့ BMW electrified wingsuit အကြောင်းကို ပြောပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီ suit မှာဆိုရင် လျှပ်စစ် စွမ်းအင်သုံး ကာဘွန် ပန်ကာ ( ၂ ) ခု ပါဝင်ပြီး ပန်ကာ တစ်ခုချင်းစီက လျှပ်စစ် ဓာတ်အား ( ၇.၅ ) ကီလိုဝပ် အထိ ထုတ်နိုင်ပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ အမြန်နှုန်းကတော့ ( ၂၅၀၀၀ ) rpm ရှိပြီး စုစုပေါင်း လျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်အားကတော့ ( ၁၅ ) ကီလိုဝပ် အထိရှိပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
Salzmann ရဲ့ ရှင်းပြချက်အရ ဒီဝတ်စုံဟာ တစ်နာရီကို ( ၃၀၀ ) ကီလိုမီတာ အရှိန်ထိပြီး ချက်ချင်းတင်ပြီး မောင်းနှင်နိုင်တယ်လို့ ပြောပြထားပါတယ် ။ ဝတ်စုံကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့စဉ်တုန်းက အမြင့်ပေ ( ၃၀၀၀ ) မီတာ ကနေ ခုန်ချပြီး ဩစတြီးယား ရဲ့ တောင်ကြားတွေ ထဲမှာ ပျံသန်းပြသခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
အခုပြောပြပေးထားတာကတော့ အနာဂတ်မှာ လူတွေ မိုးပေါ်ပျံသန်းဖို့ အလားအလာရှိတဲ့ စက်ပစ္စည်းနှင့် ဝတ်စုံများ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း အခုလိုမျိုး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို ရှာဖွေ တင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့ Shwe Khit ကို စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံမှာသာ ရှိတဲ့ ထူးခြားတဲ့ ဥပဒေ (၁၀) ခု